Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Coronavirus sitrana tany amin'ny firenena 8
Toerana fitsangatsanganana inona no azo antoka amin'ny Coronavirus?
Ny viriosy dia nametraka lozisialy hita tamin'ny indostrian'ny fizahan-tany, na dia tsy manana trangana virus aza ny ankamaroan'ny firenena eto an-tany. Ny fikambanana World Health dia tsy nanolo-kevitra mihitsy ny hanakatona ny sisin-tany ary hikorontana amin'ireo maniry hizaha izao tontolo izao.
Miasa mandrakariva ny mpahay siansa mba hitady fanasitranana sy vaksinin'ny COVID-19, antsoina koa hoe coronavirus. Miaraka amin'ny tranga 68,386 19 an'ny COVID-1894 any Shina fotsiny sy ny fahafatesan'ny 8, vaovao tsara tsy ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany ihany fa firenena XNUMX no afaka nanala sy nanasitrana ireo izay voan'ny virus.
Ny vaovao tsara dia, nitatitra ny fahafatesan'ny virus 143 sy filentehana amina tranga vaovao i Shina omaly raha nidera ny ezaka nataon'ny firenena hifehezana ilay aretina vaovao ny lehiben'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny fahasalamana, tamin'ny filazany fa “nividy ny fotoan'izao tontolo izao” izy ireo ary tsy maintsy manao firenena hafa ny ankamaroany.
Nandritra izany fotoana izany i Frantsa dia nitatitra ny fahafatesan'i Eoropa voalohany tamin'ny virus vaovao, mpizahatany sinoa iray avy any amin'ny faritanin'i Hubei, izay nipoiran'ny aretina tamin'ny Desambra. Etazonia dia niomana ny hampidina ireo mpandeha amerikana mody any amin'ny quarantine ao anaty sambo fitsangantsanganana iray amorontsiraka Japon.
India, Russia, Spain, Cambodia, Nepal, Belgique, Sri Lanka, Finlandia dia samy nanana tranga voan'ny Coronavirus avokoa ary afaka nanala ilay virus tamin'ireny firenena ireny.
Mila fifehezana sy fanoloran-tena ary indraindray toeram-pitsaboana ambony indrindra hanaovana izany.
Raharaham-barotra lehibe ny fizahantany any amin'ny firenena sasany voakasik'izany. Ny fanafoanana sy fanavakavahana ireo mpizahatany avy amin'ny firenena sasany dia mety tsy ho lakilen'ny famelezana ny fandrahonana amin'ity virus ity.
Kambodza vao omaly no nilaza izany was mandray ireo mpizahatany avy any Shina amin'ny sandriny malalakas ary namporisika ireo hôtely hanolotra tahan'ny finamanana manokana amin'ireo mpitsidika sinoa.
I Nepal dia hivoaka amin'ny fampisehoana varotra indostrialy fizahantany ITB any Berlin. Tsy mitsahatra mankalaza ny taonan'ny Nepal 2020 ny firenena, taona manokana hampiroboroboana ny fizahantany. Ny birao fizahan-tany any Nepal miaraka amin'ny masoivohon'i Nepal any Berlin dia efa nanoratra mpividy 200 sy mpinamana ambony any Nepal handray anjara amin'ny Nepal Night nokarakarain'ny eTN tamin'ny 5 martsa ao amin'ny Lagenhaus any Berlin, Alemana. Mpamaky ny eTurboNews asaina hankalaza ny fizahan-tany sy toeran-kaleha any Coronafree.
Misoratra anarana amin'ny Alin'ny Nepal any Berlin ao amin'ny ITB
Ho an'i Sri Lanka dia vaovao mahafaly ihany koa ny fanafoanana ny Coronavirus satria mbola miarina amin'ny tranga fampihorohoroana ny firenena tamin'ny volana aprily 2019, izay nahafatesana mpitsidika maherin'ny 40. Sri Lanka manolotra visa mpizahatany maimaimpoana izao. Vondronà hotely lehibe ao Sri Lanka Jetwing Hotels vao niarahaba ny vahiny voalohany nanatrika ilay vao nosokafana Jetwing Kandy Gallery Resort.
Vegan-Sakafo-sakafo-natolotra-tany-Jetwing-Ayurveda-Pavilions, Sri Lanka
Mampalahelo fa mety tsy vaovao afa-tsy amin'ny fotoana vitsivitsy sy voafetra ity, hoy i Narasimhan, CEO an'ny orinasa mpamokatra fanafody any Switzerland, Novartis, tamin'ny CNBC: , mila mampiasa fifehezana epidemiolojika tokoa isika mba tena hahatonga ity toe-javatra ity amin'ny toerana tsara kokoa.
Amin'izao fotoana izao, ny virus dia miasa any amin'ireo firenena manaraka miaraka amina tranga marobe voarakitra. Ny tahan'ny marary dia mety ho avo kokoa satria ny tranga sasany amin'ny virus dia toy ny sery malemilemy ary mety tsy ho fantatry ny olona voany, na dia mifindra aza izy ireo.
Korea Atsimo (28)
Safertourism dia mikarakara hetsika fisakafoanana maraina minitra farany teo amin'ny sisin'ny fampiratiana ITB any Berlin, Alemana. Fampahalalana bebe kokoa momba ny fomba fandraisana anjara: http://safertourism.com/coronavirus/
Tsindrio raha hiditra ny fifanakalozan-kevitra
Safertourism dia manolotra webinars manokana miaraka amin'i Dr. Peter Tarlow, manam-pahaizana fanta-daza amin'ny fiarovana sy fiarovana ny fizahan-tany sy fizahan-tany ihany koa. Mampianatra amin'ny sekoly fitsaboana ihany koa i Dr. Tarlow ary nianatra momba ny Coronavirus. Fampahalalana bebe kokoa momba ny fomba ahafahan'ny orinasa iray na toeran-tsofina miditra ny serasera https://safertourism.com/qa/